Semalt Expert amin'ny famoronana endritsoratra manokana amin'ny Wordpress - 4 Easy Steps
Ny karazan-tarehimarika voatokana dia ny lahatsoratra fototra izay manana ny karazam-pifidianana samihafa voafaritra ao amin'ny code. Taorian'ny famoahana ny WordPress 3.0, mora ho anao ny mamorona ny karazan-tarehinao. Raha mamorona azy ireo amim-pahombiazana ianao ary miaraka amin'ireo fepetra havanana, dia hanana faritra manokana eo amin'ny tiro kely ianao ary afaka mampivelatra ny raharahanao. Marina fa WordPress dia rafitra fitantanana matihanina matanjaka be izay manolotra safidy maro amin'ny fitorahana bilaogy. Nandritra ny taona maro dia lasa sehatra goavana izy io ary mamela antsika hanangana tranokala fototra sy matihanina. Ny endri-javatra vaovao dia ampidirina isanandro, toy ny fomba amam-panao manokana, ny karazan-dahatsoratra, ny endrika ary ny widgets.
Raha te hampizarazara ny votoatin'ny tranonkala ho sokajy samihafa mifototra amin'ny rafitra sy ny fametrahana ny tranokala ianao dia tsy maintsy mamorona ny karazana post manokana. Ao anatin'ny WordPress, azonao atao ny mamaritra ny sokajy, ny lahatsoratra, ary ny marika amin'ny mpanoratra manokana. Azonao atao koa ny mampiditra sary ary manome fahatokisana ny tranokalanao, ary izany rehetra izany dia noho ny karazana posttype.
Eto i Oliver King, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia niresaka momba ireo dingana efatra tsotra mba hamoronana endri-tsoratra manokana amin'ny WordPress.
Dingana 1 - Soraty ny sokajy Post
Ny dingana voalohany dia ny fanoratana ny karazana hafatra. Ho an'ity, tokony hanokatra ny fonosa fonctions.php ianao ary ampio ny singa manokana amin'izany..Tokony ho azo antoka fa ampidirina ao amin'ny PHP tag ny code. Misy fitsipika samihafa azo ampiasaina eto, fa ny tena mahazatra dia:
function movie_reviews_init - Manampy antsika hamorona asa vaovao amin'ny endritsoratra amin'ny endriny. Ity lahatsary ity dia napetraka ao amin'ny fonction fonctions.php
Label - Ity kaody famaritana ity dia tokony ampidirina ao anaty tahiry PHP tsara. Ny Wordpress dia hampiasa ny fampahalalam-baovao voatonona ato amin'ity code ity hamaritana ny mombamomba anao
show_ui - Manampy amin'ny famokarana UI ny endri-tsoratra ary manampy amin'ny fitantanana ireo hafatra araka ny mahazatra ao amin'ny tontonana Admin. Azonao atao koa ny mametraka azy ho marina na diso noho ny zavatra takinao.
Dingana 2 - Misedino ny zava-drehetra
Rehefa voafaritra ny karazan-drakitry ny endri-tsoratra ao amin'ny fonction fonctions.php, dia tokony hiditra ao amin'ny doka WordPress ianao mba hahitana raha efa vita tanteraka ny zava-drehetra. Raha toa ka vita tsara ny zavatra, dia hahita mijery vaovao vaovao eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery antsoina hoe Movie Reviews ianao. Hoverana io safidy io, ary hahita karazana post hafa ianao. Kitiho ny safidy Add New ary miasa amin'ny fampisehoana ny hafatrao manokana. Raha tsindrio ny safidin-kevitry ny post, dia ho hitanao ny fomba hita eo amin'ny pejy fandraisana ny hafatrao .
Dingana 3 - Mamorona Templates momba ny Custom Post
Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Hatao eo akaikiny ny teboka farany. Ao anatin'ity lahatahiry ity, dia mila mampiditra fehezanteny iray manokana ianao alohan'ny hamonjena ireo fanovana. Ataovy azo antoka fa nampidirinao ilay fitsipika araka ny tokony ho izy ary miverena any amin'ny faritra admin ianao mba hahitana raha marina daholo na tsia. Ny safidy amin'ny môdely vaovao dia hiseho ao amin'ny fizarana Pejy Attributes.
Dingana 4 - Ampio Safidy bebe kokoa
Raha momba ny fialam-boly na ny horonan-tsarimihetsika ny tranonkalanao dia azonao ampidirina fanandramana filma maromaro. Noho izany dia tsy maintsy manitsy ny haben'ny sarimihetsika sarimihetsika avy amin'ny kaonty WordPress ianao. Hahita fanangonana fanadihadiana izay azo alamina sy averina arakaraka ny karazan-dahatsoratra tianao Source .